Miyir qabka Madaxweyne Trump oo shaki la gelinayo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Miyir qabka Madaxweyne Trump oo shaki la gelinayo
Miyir qabka Madaxweyne Trump oo shaki la gelinayo
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isku tilmaamay in uu yahay qof degen oo fayow isagoo si xanaaq ah uga jawaabay buugga laga qorey.
Buug laga qoray Madaxweyne Trump ayaa dhaliilaha lagu daabacay waxaa ka mid ahaa in uusan ka adkayn shaqada loo igmadey ee xilka madaxweynaha dalka mareykanka.
Madaxwayne Trump ayaa bartiisa Tweetarka ku soo qoray in labada arrin ee uu ku sifeysan yahay ay yihiin in maskax ahaan uu deggan yahay islamarkana uu fariid yahay.
Madaxwayne Trump ayaa sheegay in uu guulo ka gaaray dhanka ganacsiga islamarkana uu ahaa xiddig dhanka telefishanada ah.
Qoraaga buugga laga qoray Trump Michael Wolff ayaa sheegay in buugiisu aakhirka sabab u noqon doono in xilka uu waayo madaxweyne Trump. Buug laga qoray madaxwayne Trump ayaa lagu sheegay in shaqaalaha aqalka cad ay u arkaan in uu yahay caruur.
Qoraaga buugan Michael Wolff ayaa sheegay in shaqaalaha aqalka cad ay rumaysan yihiin in maskixiyan ay wax u dhiman yihiin Mr Tump. Hase yeeshee Qoraallo uu bartiisa Twitter soo dhigay ayuu ku adkaystay Mr trump in deganaanshiyo maskaxeed ay tahay hantida ugu muhiimsan ee uu haysto.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa difaacay madaxwayne Trump ka dib buug laga qoray madaxwaynaha. Mr Tillerson ayaa sheegay in waligii uusan ka shakinin caafimaadka maskaxda madaxwayne Trump.
Sharciga dowlada Maraykanka ayaa qoraya in haddii laga shakiyo miyri qaka Madaxweynaha baaritaan caafimad lagu sameynayo haddii ay cadaato inuusan miyir qabina waxaa talada dalka la wareegaya ku xigeenkiisa.